Jijiga: Dad Somali ah oo Lagu Xidhay Koontarbaan Degaanka Somalida Itobiya – Rasaasa News
Jijiga: Dad Somali ah oo Lagu Xidhay Koontarbaan Degaanka Somalida Itobiya
May 15, 2011 degaanka Somalida ethiopia, ethiopia, Jijiga: Dad Somali ah oo Lagu Xidhay Koontarbaan Degaanka Somalida Itobiya, Somali
Jijiga, May 15, 2011 [ras] – Boqolal ruux oo u dhalatay waqooyi galbeed ee dalka Somaliya [somaliland] ayay Ciidamada New Police-ka ee Dawlad degaanka Somalidu Itobiya gacanta ku dhigeen iyaga oo xadka ka soo talaabinaya alaabooyin koontarabaan ah.
Wararku waxay sheegayaan in Maxkamada Cadaalada ee Dawlad degaanka Somalida Itobiya, ay todobaadkii in dhaafay ku riday xukun maxkamadeed oo kala duwan dad koontarbaan soo galiyey dalka. Maxkamada cadaalad ee Jijiga, ayaa ku heshay cadaymo dadkan in ay si sharci daro ah u soo galiyeen dalka koontarabaan, ka dibna ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada New Police-ku. Waxaa la sheegay in dadkani ay hore dalka u soo galiyeen kontarabaan aad u badan.
Dadka la qabtay ayaa tiradooda lagu sheegay 110 ruux, kuwaas oo 60 ka mid ah la xukumay, 40 ka mid ahna ay maxkamadu ganaax lacageed saartay, ka dib kolkii lagu cadeeyey dambigii loo haystay, 10 ka mid ah dadka la qabtay ayaa dambi lagu waayey.
Dhawaan ayey ahayd, kolkii ay ciidamada New Police-ku xadka ku qabteen 15 gaadhi oo siday Adhi, kaas oo ay si sharci daro ah dalka uga qaadayeen. Baabuurtaas iyo darawaliintii waday ayay maxkamada cadaalada ee Jijiga, xukun ku riday, xoolihii ay sideena waxaa la wareegay ciidanka ilaalinta xuduuda iyo canshuuraha ee dawlad degaanka Somalida Itobiya. Xoolahaas ayaa hada lagu ilaaliyaa beerta naaxiinta xoolaha, ee u dhaw tuulada dhagaxle.
Ganacsatada u dhalatay gabalka waqooyi galbeed ee dalka Somaliya, ayaa caadaystay soo galinta koontarabaanka iyo qaadashada xoolaha nool iyaga oo aan marin sharciga caalamiga ah ee ganacsiga. Ganacsatadani waxay wakhti dheer si gaar ah, oo aan sharci ahayn uga ka faa,iidaysan jirtay, ilaalo la,aanta xuduuda dheer ee u dhaxaysa dalka Somaliya iyo degaanka Somalida Itobiya [Ogaden region].
Waaxda ilaalinta canshuuraha iyo ka hortaga koontarbanka ee dawlad degaanka Somalida Itobiya, ayaa hore sharciyo uga soo saartay arimaha koontarabaanka.
Waxaana tan iyo intii la sameeyey sharcigan lagu fuliyey dad ka badan 350 ruux, oo si sharci daro ah u soo galinayey alaab iyo kuwo si sharci daro ah hanti uga saarayey dalka.
Qorshaha Waxqabad ee Gabdhaha Qurba Joogta ah ee Gabalka Qoraxeey
Dilka Loogaystay Shaqaalaha WFP, Waxay Ceeb ku Tahay Dawlada Ethiopia